Manome toky hanatsara ny tontolo iasàn’ireo irakiraka mpanatitra entana i Shina. Mifanipaka amin’izany anefa ny fisamborany mpikatroka iray avy amin’ny sendikan’ny mpiasa · Global Voices teny Malagasy
Higadra 5 taona i Chen Guajiang, mpiasa mpanatitra entana sady mpikarakara hetsika, noho ny 'fandrantoana ady '
Voadika ny 02 Mey 2021 16:47 GMT
Mety hisazy dimy taona am-ponja i Chen Guojiang, mpiasa mpanatitra entana, noho ny “fandrantoana ady manakorontana filaminambahoaka.” Pikantsary avy amina lahatsarin'ny HK citizen news.
Ny 27 Aprily, niseho tao amin'ny fantsom-pahitalavitra tao an-tanana i Wang Lin, filoha lefitry ny departemantan'ny fifandraisana momba ny asa avy amin'ny Birao Misahana ny Mpiasa sy ny Fiarovana Sôsialy ao Beijing, manao asana mpamily mpanatitra entana. Taorian'ny fihodinana nandritra ny ora 12 dia tsy nahazo afa-tsy 41 dolara RMB (latsaky ny 6,5 dolara amerikàna) i Lin.
Taorian'ny hetsika nataony tao amin'ilay fandaharana anaty TV, izay ny tanjona dia ny hampisehoana ny fomba fikarakaran'ireo manampahefana ao Beijing ny olompireneny, nilaza i Wang fa ny departemanta misy azy dia eo an-dalam-pifanakalozankevitra fikatsahana izay ho fanatsarana mivaingana mahakasika ireo fampiasa amin'ny fanaterana entana, momba ny fepetram-piasàn'ireo mpiasa mihazakazaka manatitra entana sy ireo mpamily.
Meituan, fampiasa iray vita shinoa ho an'ny fanaterana sakafo, manana olona 290 tapitrisa mavitrika mampiasa azy, dia nalaky be tamin'ny fanaovana fanambaràna iray ho an'ny daholobe, nanome toky fa hanatsara ny sehatra fitsinjarana ny famandrihana entana ao aminy, nametraka fantsona iray fandraisana fitarainana avy amin'ireo mpiasa ary fanomezana azy ireny fialantsasatra fanampiny.
Andro vitsy monja nialoha ny Fetin'ny Asa, niparitaka be tany anaty media sôsialy shinoa ny lahatsary nahitàna an'i Wang mitaingina moto eny amin'ireo arabe ao Beijing, ary marobe ireo mpampiasa naneho hevitra tao ambaniny tamin'ny alàlan'ny Weibo.
Mpampiasa iray antsoina hoe “Xiao-hei-ye-zhi-jing” (小黑夜之睛), izay nanolotra ny tenany ho toy ny mpiasa mpanatitra entana, no nilaza fa tsy hiova ny fepetra iasan'ireo mpamily raha tsy ohatra angaha iantohan'ireo manampahefana ny handraisan'ireo sehatra manakarama azy ireny ho toy ny mpiasa ary omena fiantohana ireo mpamily efa ambony traikefa ao amin-dry zareo. Ho an'ireo tsy mpiasa raikitra kosa, milaza izy fa tokony ho afaka hisafidy ny iraka ho aleha izy ireny fa tsy voatery ho tsy maintsy mandray izay atolotra azy. Sosokeviny ihany koa ny mba hampiharan'ny governemanta tahan-karama farany ambany isaky ny iraka ary haneren'ny governemanta ireo sehatra ireo hanitsy izany karama izany mifanaraka amin'ny halavirana ho aleha, ny lanja ary ny haben'ireo entana ho aterina.
Miaraka amin'ny fisian'ny valanaretina COVID-19, nitosaka be nanerana izao tontolo izao ireo tolotra fanaterana entana. Tsy misy hafa amin'izany ny tao Shina izay, tamin'ny 2019, mpiasa mpanatitra entana efa maherin'ny 10 tapitrisa no nampiasain'io sehatra io, araka ny tatitra vao haingana avy amin'ny China Central Television. Vao mainka nitombo ny isa nanomboka teo, satria navoakan'ny sehatra iray mpanao asa fanaterana entana fa tanatin'ny volana roa monja nandritra ilay valanaretina, manodidina ny 580.000 ireo mpiasa vaovao mpanatitra entana nisoratra anarana tao amin'ilay sehatr'izy ireo.
Manerana ny tany, toy ny ao Shina, manatanteraka asa mampididoza ireo mpamily mpanatitra entana ary miasa mandritra ny ora maro. Saingy amin'ny maha-mpiasa mahaleotena azy ireo, tsy manana ireo zo fandrain'ny mpiasa ry zareo, toy ny fetran-karama farany ambany, ny fiantohana ara-pahasalamana ary ny andro fialantsasatra nefa andraisana vola.
Tamin'ny 2019, efa in-45 nisy fitokonana raha ny sehatry ny asa fanaterana sakafo tao Shina, araka ny tatitry ny China Labour Bulletin, fikambanan'ireo sendikan'ny mpiasa ao Shina.
Heverin'ny fandaharana fanehoana ny zavamisy ao Beijing (reality show) fa mahatsapa tsara ireny olana ireny ny governemanta shinoa. Saingy tany aloha tany, nosazian'ireo manampahefana ireo mpiasa mpanatitra entana mba niezaka ny nanandratra ny feony sy nitaky ny hanatsaràna ny fepetram-piasany ho tsaratsara kokoa.
Fisamborana mpiasa iray mpanatitra entana sady mpikatroka mafana fo
Tamin'ny Jolay 2019, nanokatra vondrona WeChat iray ilay mpiasa mpanatitra entana ao Beijing, Chen Guojiang, nomeny anarana hoe “fifanakalozan'ireo mpihazakazaka mpanatitra entana” niarahany tamin'ireo namana mpiara-miasa aminy. Volana telo taorian'io, nikarakara fitokonana ilay vondrona. Nosamborina i Chen ary notanana am-ponja nandritra ny 26 andro.
Tsy nampiato ny herimpon'i Chen ny fihazonana azy. Tamin'ny Desambra 2019, nikarakara ny “vovonan'ireo mpiasa mpanatitra entana” izy, izay aty amin'ny 2021, niofo ho tambajotra iray ahitàna vondrona WeChat 16 manana mpikambana 14.000.
Ny 25 Febroary tamin'ity taona ity, nosamborina indray i Chen taorian'ny namoahany fa sandoka ilay rafitra fanomezana fankasitrahana natomboky ny sehatra Ele.me nandritra ny Taombaovao manaraka ny Volana. Tao anaty lahatsary iray, noporofoin'i Chen ny fomba ataon'ilay fampiasa ka ampitsaharany ireo famandrihana tsy ho any amin'ireo mpamily, vantany vao tsikariny fa kely sisa dia ho tratran'ireo mpamily ny tanjona napetraka tamin'izy ireo.
Ny 2 Aprily, nahazo ny taratasy ofisialy ny fianakavian'i Chen nampilaza tamin'izy ireo fa mety “ho voaheloka no nanangana ady sy niteraka korontana” izy. Sazy hatramin'ny dimy taona an-tranomazina no mety ho azony.
An excellent report by @supchinanews & @ZixuWang_News on the detention of delivery worker/activist Chén Guójiāng (#陈国江) and what it means for workers in China's booming gig economy 👇https://t.co/qFrQO7lAGJ
Ao Shina, miady manohitra rafitra iray feno fitaka ireo mpiasa mpanatitra entana
Tatitra iray tonga lafatra nalefan'ny @supchinanews & @ZixuWang_News momba ny fitànana an'i Chén Guójiāng (#陈国江), mpiasa mpanatitra entana/mpikatroka ary ny dikan'izany ho an'ireo mpiasa anatin'ny toekaren'ny asa madinika miroborobo be ao Shina 👇https://t.co/qFrQO7lAGJ
— CHRD人权捍卫者 (@CHRDnet) 20 Aprily 2021
Tsy nahasakana ireo hafa mpiasa mpanatitra entana tsy hikarakara fitokonana anefa ny nisamborana an'i Chen. Nandritra ny fotoam-pivoriana nataon'ireo kaongresy roa tamin'ny Martsa, tany amin'ireo tanàna shinoa sasantsasany, isan'ireny i Linyi, any amin'ny faritanin'i Shandong, Shenzhen, faritanin'i Guangdong, ary Tongxiang any Zhejiang, dia nisy vitsivitsy ireo fitokonana madinidinika natao ho setrin'ny fampidinan'ilay goavan'ny varotra an-tserasera ny saran'ny fanaterana entana nafarana.
Ny jadon'ny algôritma
Septambra 2020, nisarika ny mason'ny vahoaka ao Shina ny fanararaotana atao an'ireo mpiasa mpanatitra entana, rehefa injay ilay gazetiboky miaraka amin'ny fanjakana, Renwu, nanao tantara iray fanadihadiana momba ny fomba tsy rariny ataon'ilay algôritman'ny Meituan hanasaziana ireo mpiasa.
Navoitran'ilay fanadihadiana fa rafitra iray be pitsopitsony no mamaritra ny karama isaky ny iraka raisin'ny mpiasa iray mpanatitra entana, izay mandray ho anaty kajiny ny isan'ny iraka isanandro raisin'ilay mpiasa, ny fahamarinam-potoana, ny fanombànana sy fitarainana ataon'ireo mpanjifa.
Ny fepotoana kely indrindra ilaina hanaterana entana, araka ilay fanadihadiana, dia ny “fepetra farany ambony” no mamaritra azy — toetrandro maina, tsy dia misy mpifamoivoy eny an-dàlana ary vitan'ilay trano fisakafoanana ny manomana ara-potoana ilay sakafo. Matetika ihany koa ny làlan-kizorana eritreretina dia mifanohitra amin'ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana.
Tsikariny fa rehefa mametraka fitarainana ny mpanjifa iray, izay matetika mitranga rehefa taraiky ny fanaterana ny zavatra nafarany, dia tratry ny sazy ara-bola ilay mpiasa mpanatitra entana, izay mety ho hatramin'ny karamany andro iray mihitsy. Ny ratsy indrindra dia ny famafàn'ilay fampiasa tsotra izao fotsiny ny kaontiny.
Asehon'ireo tatitra avy amin'ny governemantan'i Shanghai fa nandritra ny telovolana roa voalohany tamin'ny 2019, tafiditra tamin'ny fitrangàna lozam-pifamoivoizana niisa 325 ny sehatry ny asa fanaterana entana, izay ny antsasa-manila amin'ireo tranga 570 nisy.
Manoloana ny kiana ataon'ny vahoaka, efa nanomboka nanitsy ny algôritmany ireo sehatra goavana misahana fanaterana sakafo ao Shina mba hanomezana minitra vitsivitsy azo leferina. Saingy notazonin-dry zareo ireo fepetra hafa, toy ny fanomezana ‘bonus’ isambolana ho an'ireo mpihazakazaka nahavita iraka betsaka ary ny fandaharana ireo mpiasa arakaraky ny zavabita. Mba hampalaky ny asa fanaterana ataon'ireo mpiasa no nanamboarana azy ireny–tsy ijerena ny fiantohana ny ara-batana manokan'izy ireny.
Ny 11 Janoary, nisarika ny sain'ny rehetra indray ny hetsipanoherana iray tao Jiangsu ho setrin'ny famonoantenan'i Liu Jin, mpiasa iray mpanatitra entana. Nanandrana namono tena ilay mpiasa 47 taona taorian'ny nangalàn'ilay sehatra misahana fanaterana entana ny vola 5.000 dolara RMB (770 dolara amerikana eo ho eo) tamin'ny karamany. Tena nizaka fahamaizana mavesatra tokoa izy ary tany amin'ny hôpitaly dia voalaza fa nanafatra ny anabaviny izy fa “tena reraka ka tsy te-ho velona intsony”.
Ny voalohany mitarika ho amin'ny famonoantena dia ny harerahan-tsaina tsy voatsabo. Azo tsaboina ny harerahan-tsaina ary azo sorohana ny famonoantena. Azonao atao ny mahazo fanampiana amin'ny alàlan'ireo laharana'antso ahazoana tohana mangingina ho an'ireo manana eritreritra ny hamono tena na ireo olona mandalo olana ara-pihetsehampo. Tsidiho ny Befrienders.org hahitàna izay laharana fakàna fanohanana ho fisorohana ny famonoantena, mifanaraka amin'ny firenena misy anao.